Google မြေပုံအမှတ်အသားအသစ်များ Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 2, 2007 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2015 Douglas Karr
ဒီတနင်္ဂနွေက ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး အတွက်မြေပုံဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားပြီ။ ဒီနေရာမှာလက်ရှိအမှတ်အသား (အိုင်ကွန်) စုဆောင်းမှုတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်ရမည်၊ ငါအနားယူနေစဉ်မှာစုဆောင်းမှုအသစ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အခမဲ့ခံစားရသည် ဒီမှာအမှတ်အသားများကို download လုပ်ပါ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန်အသုံးပြုပါ။ ကျွန်ုပ်၏တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်မှာကောင်းပါသည် ကြေးဇူးတငျစကား!
အရိပ်၊ အလွတ်အမှတ်အသား၊0မှ9အထိအမှတ်အသားများနှင့် A မှ Z တို့ပါသောမြားရှိသည်။
Tags: google မြေပုံမြေပုံအမှတ်အသားများ
29:2008 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 30
ဟေ့၊ မင်းရဲ့ icon တွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးငါ့ပရောဂျက်မှာသုံးခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရွှင်လန်း,
8:2008 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 1, 57
ဧပြီ 3, 2008 မှာ 4: 40 AM
ဧပြီ 6, 2008 မှာ 2: 28 AM
ငါ့ကိုအိုင်ကွန်များ download လုပ်ခွင့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဧပြီ 7, 2008 မှာ 9: 24 pm တွင်
ဧပြီ 12, 2008 မှာ 7: 46 pm တွင်
အိုင်ကွန်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !! ကြီးမြတ်လှတယ်။
ဇွန် 11, 2008 မှာ 4: 17 pm တွင်
11:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 20
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ပရိုဂရမ် gpsdings မှထုတ်သောမြေပုံများအတွက်သင်၏တံဆိပ်ကပ်ထားသောအမှတ်အသားပုံလေးကိုသုံးကောင်းပြုလိမ့်မည်။http://gpstools.sf.net).
11:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 06
11:2008 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 56
ဒေါက်ဂလပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါတွေကအရမ်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်၊ ​​ကြိုးတွေမပါဘဲအသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
11:2008 pm တွင်သြဂုတ်လ 6, 15
စက်တင်ဘာ 6, 2008 မှာ 3: 07 AM
ကျွန်ုပ်သည်ဤနံပါတ်တပ်ထားသောအမှတ်အသားများကိုသာရှာဖွေနေသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဂူဂဲလ်မြေပုံတွင်မည်သို့ထည့်ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အိုင်ကွန်တွင်ထည့်ရန်နည်းလမ်းရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဂူဂဲလ်မြေပုံများသို့ဝက်ဘ်ပေါ်သို့ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရသည်။ သငျသညျနားလညျနိုငျသကဲ့သို့လိုလားသူမဟုတ်ပေမယ့်ငါငါ့မြေပုံပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်မှနှစ်သက်!
28:2008 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 45
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် mate !! Preaty ကြင်ပြုသောအမှု !!
ဒီဇင်ဘာ 9, 2008 မှာ 5: 05 AM
30:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 51
ငါသည်သင်တို့ကိုတစ် ဦး ကော်ဖီပိုင်ဆိုင် own
10:2009 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 5, 08
မတ်လ 25, 2009 မှာ 2: 52 AM
မှ Ian Shannon
ဧပြီ 6, 2009 မှာ 5: 41 pm တွင်
အမှတ်အသားများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်းကတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကိုစုဆောင်းရန်ကျွန်ုပ်သည်သင်၏အနီရောင်နီများကိုရွေးချယ်အသုံးပြုသည်။ ငါ (အလွယ်တကူ)2နှစ်အစောပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအတွက်ငါသုံးပြီးသောအခြားသက်ဆိုင်ရာအစုံစေရန်အရောင်ပြုပြင်ထားသောပါပြီ။
အကြံပြုချက်တစ်ခုအနေဖြင့်သင်သည်အခြားသင်္ကေတများနှင့်လည်းအမှတ်အသားများရှိနိုင်သည် ( + - * #? ။ : ) နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော shadings ။ ဟေ့ပင်အစင်းဖြစ်နိုင်သည်!
ဧပြီ 13, 2009 မှာ 5: 44 pm တွင်
Raj B က
ဧပြီ 23, 2009 မှာ 5: 20 AM
13:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 11, 44 မှာ
စက်တင်ဘာ 15, 2009 မှာ 10: 11 AM
13:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 3, 01
ကျွန်ုပ်သည် "Map icons collection" ကိုဖန်တီးသူဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်သင့်ဘလော့ဂ်တွင်ကျွန်ုပ်၏စီမံကိန်းအကြောင်းပြောလိုလျှင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
မြေပုံအိုင်ကွန်များစုဆောင်းခြင်းသည်သင်၏စာတန်းထိုးအမှတ်အသားများအတွက်အခမဲ့အိုင်ကွန် ၃၀၀ ပါရှိသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏မြေပုံများအင်္ဂါရပ်ဖြင့်သင်၏ Google Maps တွင်သို့မဟုတ် Google Maps API ဖြင့်အလိုအလျောက်ထည့်နိုင်သည်။
အရောင်အမျိုးအစားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းအားဖြင့်သင်ကရုပ်ရှင်ရုံ၊ ကျောင်း၊ ဘဏ်၊ ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်နှင့်အဝတ်အထည်စသောအိုင်ကွန်အားလုံးစုဆောင်းရရှိလိမ့်မည်။